Kubvunzana naCarlos Quintanilla - QGIS
Takataura naCarlos Quintanilla, iyezvino purezidhendi weQGIS Association, uyo akatipa vhezheni yake pamusoro pekuwedzera kwekudiwa kwemabasa ane chekuita negeosciences, pamwe nezvinotarisirwa kwavari mune ramangwana. Hazvisi chakavanzika kuti vazhinji vatungamiriri vetekinoroji muminda yakawanda -kuvaka, mainjiniya, nevamwe-, “iyo…
TwinGEO 5th Edition - Iyo Geospatial Pfungwa
CHIMWE CHIMWE CHIMWE CHINANGWA CHENYAYA Mwedzi uno tinopa Twingeo Magazine muchinyorwa chayo chechishanu, ichienderera mberi nedingindira repamberi re "The Geospatial Perspective", uye ndezvekuti pane micheka yakawanda yekucheka maringe nezveramangwana rehunyanzvi hwenyika uye kubatana pakati peizvi mune zvimwe maindasitiri ekukosha. Tinoenderera mberi nekubvunza mibvunzo inotungamira ku ...
Pamusoro pezvakanaka mumashoko eQGIS 3.X
Zvinonakidza mashandiro anoita Open Source kugona kuzvisimbisa nenzira yakatsiga uye nekupa mikana yebhizinesi kune avo vakawedzera kukosha kuti vape. uku uchibvumira kuzvitsaurira kune musimboti webhizinesi uchiziva kuti izvo zvinodikanwa zvichafukidzwa nevamwe vanyanzvi mubhizinesi ravo. Pakati peaya mamodheru, WordPress inokodzera kuyemurwa kwangu, ...
Yese Mashoko kubva kuQGIS
Ichi chinyorwa chekudzokorora chenhau dzese dzakaitika muQGIS. Panguva ino yakagadziridzwa kuita vhezheni 2.18. QGIS nhasi ndeimwe yeakavhurika sosi sosi yekushandisa, ine mukana wekukwikwidza neyekuchengetedza software nenzira inogara iripo. [inotevera peji title = "QGIS 2.18 Las Palmas"] Nhau ...
Kutora kosi yeQGIS zvirokwazvo iri muchinangwa chevakawanda chegore rino. Pamapurogiramu akavhurwa sosi, QGIS ndiyo yakava mhinduro mukuda kukuru, zvese nemakambani akazvimirira nemasangano ehurumende. Saka, kunyangwe iwe uchiziva ArcGIS kana chimwe chishandiso, sanganisira mune rako rekushandira ...
Kudzidzisa CAD / GIS, qgis
3 27 kubva 2.18 QGIS kuchinja
Kana isu tave kuda kupedza hupenyu hweQGIS mushanduro 2.x, takamirira ichave QGIS 3.0, peji rino rinotiratidza izvo zvinosanganisira QGIS 2.18.11 'Las Palmas', yakaitwa zviri pamutemo muna Chikunguru wegore rino. QGIS parizvino ine inonakidza rebound maererano nevatsigiri vatsva, makambani epamutemo ayo ...
Python: mutauro kuti inofanira tanga geomatics
Gore rakapera ndakakwanisa kupupurira kuti shamwari yangu "Filiblu" yaifanirwa kuisa parutivi chirongwa chake cheVisual Basic yeApplications (VBA) iyo yaainzwa kugadzikana, uye ndokumonera maoko avo vachidzidza Python kubva pakutanga, kuti vagadzirise iyo plugin "SIT Municipal" paQGIS. Icho chikumbiro icho chasara ...
Kudzidzisa CAD / GIS, Featured, qgis
QGIS, PostGIS, LADM - muLand Management Course yakagadzirwa neIgAC
Mukubatana kwezviyero zvakasiyana, zvishuwo nematambudziko ari kusangana neColombia kuchengetedza hutungamiri muye koni yekumaodzanyemba mune zveparadhiso, pakati paChikunguru 27 naNyamavhuvhu 4, iyo Center for Research and Development yeGeographic Information - CIAF yeGeographical Institute Agustín Codazzi ichagadzira iyo Kosi: Kushanda kweiyo ISO 19152 standard ...
Kufambisa chikuva cheGeospatial makore gumi gare gare - Microstation Geographics - Oracle Spatial
Ichi chinetso chakajairika kune mazhinji eCadastral kana Cartography mapurojekiti, ayo munguva 2000-2010 akabatanidza Microstation Geographics seyenzvimbo yedata injini, tichifunga zvikonzero zvakaita seinotevera: Arch-node manejimendi yaive uye inoramba ichinyanya kushanda, kune macadastral mapurojekiti . Iyo DGN ndeimwe nzira inokwezva, ichifunga nezvekushandurwa kwayo mufaira rimwe chete, ...
Imba zvinongedzo kubva kuExcel kuenda kuQGIS uye gadzira maPolgoni
Imwe yemaitiro akajairika mukushandiswa kweGeographic Information Systems ndiko kuvakwa kwenzvimbo dzinowanikwa kubva kune ruzivo kubva kumunda. Kunyangwe izvi zvichimiririra marongero, mapasuru emagetsi, kana gridhi rekukwirisa, ruzivo rwacho runowanzouya mumafaira akapatsanurwa nekoma kana mahwendefa eExcel. ...
Office kuti zvinouraya QGIS
Dzimwe nzira dzekushandisa QGIS pane Android & iOS mobiles
QGIS yakazvimisikidza seyakakurumidza kukura yakavhurwa sosi chishandiso uye nzira yekusimudzira yekushandisa geospatial. Isu tinofara kuziva kuti kwatova neshanduro dzeQGIS dzenhare mbozha. Iko kushandiswa kwekujekesa kwemashandisirwo efoni kunoita maturusi edesktop kusarudza kugadzira shanduro dzekushandisa pane mafoni kana mapiritsi. The…
QGIS 3.0 - Sei, riini uye chii; zvinoreva
Vazhinji vedu tiri kushamisika: ko QGIS 3.0 ichaburitswa riini? Gore rapfuura (2015) timu yechirongwa yakatanga kuferefeta kuti QGIS 3.0 yaizoburitswa riini uye sei. Vakavimbisa, sekutaura kwakatumirwa naAnita Graser, kuti vachanyatsoburitsa zvirongwa zvavo kuvashandisi nevasimudziri pamberi ...
Qgis - Mathematiza mapasuru akavakirwa pamunda wekiyi yekadastral
Mhosva: Ini ndine mapasuru emasisipiti, ane cadastral kiyi inowirirana mune inotevera fomu: Dhipatimendi, Manisipari, Chikamu, chivakwa. zvekuti zita remazita rakanyorwa sekuratidzwa kwemufananidzo: Muenzaniso: 0313-0508-00059 Kudikanwa Mamiriro acho ezvinhu ndeekuti ndiri kufarira kugona kuronga nzvimbo zvichienderana neketani yechipiri, inova ...
Qgis - Muenzaniso wemaitiro akanaka muiyo OpenSource modhi
Pese patinogara pamberi pekambani kana chinzvimbo icho chinoda kushandisa chikuva chine nzira yenzvimbo yekutarisira, yakajairwa kunzwa manzwi mazhinji asina kunaka maererano nemhando dzeOpenSource, uyu mubvunzo unomuka nekusiyana kudiki. Ndiani anotsvaga QGIS? Zvinotaridza kunge zvine mutoro uye zvakajairika, kuti mugadziri anotsvaga kutsigira ...
Kufananidza uye misiyano pakati peQGIS neArcGIS
Shamwari dzeGISGeography.com dzagadzira chinyorwa chakakosha kuenzanisa GQIS neArcGIS, pane isingasviki 27 misoro. Zviri pachena kuti hupenyu hwese mapuratifomu hwakashata, tichifunga kuti kwakatangira QGIS inodzokera muna 2002, pakangobuda vhezheni yekupedzisira yeArcView 3x ... iyo yaisanganisira ...
Tumira data kubva OpenStreetMap kuenda kuQGIS
Huwandu hwe data muOpenStreetMap yakakura chaizvo, uye kunyangwe isina kunyatso kuvandudzwa, muzviitiko zvakawanda iri yakajeka kupfuura dhata rakagara richiunganidzwa kuburikidza necartographic mapepa ane chiyero che1: 50,000. MuQGIS zvakanaka kurongedza dura iri semepu yekumashure senge mufananidzo weGoogle ...
GML akavhura faira pamwe QGIS uye Microstation
Iyo GML faira ndeimwe yemafomati anokosheswa zvikuru nevakagadziri veGIS nevashandisi, nekuti kunze kwekunge iri fomati inotsigirwa uye yakaenzanisirwa neOGC, inoshanda zvakanyanya pakuchinjisa uye kuchinjana dhata mumashandisirwo ewebhu. yemutauro weXML yezvinangwa zvehunyanzvi, zita rayo rinomiririra ...
Dzidza kushandisa Revit, Robot Structural Analysis uye Advance Simbi yekuumbwa kwemagadzirirwo ezvivakwa. Dhirowa, gadzira uye gwaro ...